Tanàna Japoney Nampiasa Sary Navoakan’ny Mampatahotra Solosaina Hampianarana Ny Mponina Hanavotr’Aina Amin’ny Tsunami · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2016 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, srpski, Español, Italiano, English
Dikasarin'ny fizàrana manavotr'aina amin'ny tsunami tao Kamakura. Sary noraisina avy tao amin'ny Fantsona YouTube ofisialin'ny tanànan'i Kamakura.
Mody namorona tsunami hanampiana ny mponina ao aminy hahatakatra ny loza mety atrehiny sy nametraka drafitra hitady lalam-pandosirana ho amin'ny tsy tratran'ny voina ny tanàna Japoney iray antsoina hoe Kamakura.
Tanàna kely iray ao amin'ny Riakan'i Pasifika i Kamakura izay afa-miazo ny afovoan-tanànan'i Tokyo ao anatin'ny adiny iray raha mandeha fiaran-dalamby. Manamorona ny morondranomasin'ny helodrano ny tanàna, ambony kely noho ny haavon'ny ranomasina, ary kely foana dia tsy misy ny fiarovana raha misy ny tsunami.
Feno mpitsidika ity tanànan'ny mpizahatany ity matetika, ary mety ho tratran'ny fihovitrovitry ny tany roa lehibe farafahakeliny ao anatin'ny fotoana rehetra. Mety ho tonga hatramin'ny 5% ny herijika isian'ny horohorontany manana hery 8 amin'ny 8 manaraka ny tomandavan'ny Sagami Trough ao anatin'ny 30 taona ho avy; ary mety ho tonga hatramin'ny 70% ny fisian'ny fihovitrovitry ny tany manana hery 7 amin'ny maridrefy ao anatin'izany fotoana izany ihany.
Ny Nankai megathrust fault, [faritr'i Nankai mpisy fihovitrovitry ny tany manana vaika mihoatra ny 8,5 farafahakeliny] izay miroina ao atsimoandrefan'i Kamukura ihany koa dia tombanana fa hiaina fihovitrovitry ny tany goavana ao anatin'ny fotoana rehetra.
Ny fihovitrovitry ny tany tahaka izany dia mety hiteraka tsunami goavana ary hanafotra sy handrava an'i Kamakura. Tamin'ny 1703, ny foiben'ny fihovitrovitra ny tany matanjaka dia matanjaka nantsoina hoe Genroku, izay nitranga teo atsinanan'i Kamakura indrindra, dia niteraka onjana tsunami avo dia avo izay nandrava an'i Kamakura sy ireo faritra hafa ao Japan manamorona ny Pasifika.
Nampitandrina ny antsipirihan'ny fanaovana sarim-pandosirana navoakan'ny tanàna fa afa-mandeha hatramin'ny 36 kilaometatra isan'ora ny tsunami rehefa manatona ny tany:
It will be impossible to flee from an oncoming tsunami on foot. We are utterly powerless against the devastating might of a tsunami. The only option is to evacuate before a tsunami arrives.
Tsy mety ho tontosa ny mandositra an-tongotra amin'izay tsunami mety ho avy. Tsy mahavita na inona na inona isika manoloana ny hery mpandravaravan'ny tsunami. Ny safidy tokana dia ny miala mialoha ny hahatongavan'ny tsunami.
Nofantariny ihany koa ireo toerana sarotra andalovana sy ny lalam-pandosirana any amin'ireo faritra maro ao amin'ny tanàna. Azonao jerena ao ny lahatsary feno miaraka amin'ny dikandahatsoratra amin'ny teny anglisy :